आइपीएलः दिल्ली भर्सेस बैंग्लोर, कस्तो छ विगत? - Everest Dainik - News from Nepal
आइपीएलः दिल्ली भर्सेस बैंग्लोर, कस्तो छ विगत?
काठमाडौं, वैशाख १५ । भारतमा भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) मा आज हुने पहिलो खेल अन्तर्गत नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने आवद्ध दिल्ली क्यापिटल्स र रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो ४ः१५ बजेदेखि दिल्लीमा शुरु हुँदैछ ।
७ खेल जित्दै १४ अंकका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा रहेको दिल्ली आजको खेलमा विजयी हासिल गर्दै प्लेअफमा पुग्न चाहन्छ । यता विराट कोहली नेतृत्वको बैंग्लोर दिल्ली विरुद्धको खेलमा जीत दर्ता गर्दै प्लेअफमा पुग्ने सम्भावना जीवितै राख्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रिदैं छ ।
याे पनि पढ्नुस आइपीएलः घेरलु टोली हैदराबादलाई बलिङको निम्तो
जारी संस्करणको आइपीएलको बैंग्लोर विरुद्धको खेलमा दिल्ली ४ विकेटले विजयी भएको थियो । जुन खेलमा सन्दीपले पनि मौका पाएका थिए । बैंग्लोरमा भएको उक्त खेलमा सन्दीपले ४१ रन खर्चिदै १ विकेट हात पारेका थिए ।
बैंग्लोरविरुद्ध सन्दीपको सम्भावना कति?
सन्दीपले आजको खेलमा मौका पाउने सम्भावना छ । राजस्थान विरुद्धको खेलमा क्रिस मोरिस, शेरफोन रेदरफोर्ड विदेशी खेलाडी बलिङमा महंगा सावित भएकाले सन्दीपले मौका पाउन सक्छन् । यद्यपि, उनी बैंग्लोरसँगको पहिलो खेलमा ४ ओभरमा ४१ रन खर्चिएर मात्र एक विकेट लिँदै महंगा भएकाले टिममा स्थान नपाउन पनि सक्छन् । सन्दीपले जारी आइपीएलमा ५ खेल खेल्दा ८ विकेट लिएका छन् ।
दिल्ली भर्सेस बैंग्लोर
यी दुई टिमबीच अहिलेसम्म आइपीएलमा २३ पटक भिडन्त भएको छ । जसमा बैंग्लोरले १५ म्याच आफ्नो पक्षमा पार्दा दिल्लीले भने ७ खेलमा मात्र जीत हासिल गर्न सकेको छ । एक खेल नतिजाविहीन भएको थियो । फिरोज शाह कोटलाको स्टेडियममा बैंग्लोर—दिल्लीबीच ८ पटक भेट भएको छ । जसमा विराटको बैंग्लोरले ६ खेलमा जीत हासिल गरेको छ । दिल्लीले आफ्नो ‘होम ग्राउन्ड’ मा अन्मित पटक बैंग्लोरलाई २००९ मा हराएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस सन्दीप दिल्लीबाटै खेल्ने पक्का, टिमबाट को–को भए आउट ? हेर्नुस्
आजै हुने दोस्रो खेलमा कोलकाता नाइट राइडर्स र मुम्बई इन्डियन्स भिड्दै छन् । यी दुई टिमबीचको खेल साँझ ८ः१५ बजेदेखि कोलकातामा शुरु हुँदैछ । अंक तालिकामा मुम्बई १४ अंकसहित दोस्रो र कोलकाता सातौं स्थानमा छ ।
ट्याग्स: IPL, RCB Vs DC